အဆိုပါ UC Irvine ကျောင်းပရဝုဏ် Explore
UC Irvine သင်္ကေတပြ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ကယ်လီဖိုးနီးယား, Irvine ၏တက္ကသိုလ်အတွင်းအများပြည်သူသုတေသနတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ် တက္ကသိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယားသည့်စနစ် ။ Newport Beach အနီးတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတည်ရှိပါတယ်, UCI 1965 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းနှင့်လက်ရှိစာရင်းသွင်း 28000 ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ, ပဉ္စမအကြီးဆုံး UC ကျောင်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျောင်းသည်တသမတ်တည်းသည့်လူမျိုးထဲတွင်ထိပ်တက္ကသိုလ်များအကြားအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
UCI 80 ကျော်ဘွဲ့ကြိုဗိုလ်ကြီးနှင့်၎င်း၏ 11 ကျောင်းများအတွင်း 98 အဆင့်မြင့်ဒီဂရီပရိုဂရမ်များအတွက်ဘွဲ့ဒီဂရီကမ်းလှမ်း: အအနုပညာကို Claire Trevor ကျောင်း, ဇီဝသိပ္ပံကျောင်းစာအုပ်; စီးပွားရေး၏ရှင်ပေါလု Merage ကျောင်း, အင်ဂျင်နီယာများ၏ဟင်နရီ Samueli ကျောင်း, Humanities ၏ကျောင်းစာအုပ်; သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ Donald ဘရန် School တွင်; ပညတ်တရား၏ကျောင်းစာအုပ်; ဆေးပညာ၏ကျောင်းစာအုပ်; ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံကျောင်းစာအုပ်; လူမှုဂေဟဗေဒ၏ကျောင်းစာအုပ်; နှင့်လူမှုသိပ္ပံကျောင်း။ UCI ရဲ့ကျောင်းကအဆင်းအရောင်အပြာနှင့်ရွှေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ယင်း၏ mascot ပေတရုသည် Anteater ဖြစ်ပါတယ်။
UC Irvine မှာ Aldrich ပန်းခြံ
UC Irvine မှာ Aldrich ပန်းခြံ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
UCI ရဲ့ core ကျောင်းဝင်းဗဟိုမှာ Aldrich ပန်းခြံနှင့်အတူတစ်မြို့ပတ်ရထား layout ကို built-in ခဲ့သည်။ မူလကဗဟိုပန်းခြံအဖြစ်လူသိများ, ပန်းခြံကျောင်းသားများနှင့်ဆရာနှစ်ဦးစလုံးကအသုံးပြုနေကြသည်သောခရီးနှင့်လမ်းကွန်ယက်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ပွဲနှင့်မင်္ဂလာဆောင်ပန်းခြံနေရာယူပါ။ ပန်းခြံပတျဝနျးကငျြ Aldrich ပတ်လည်ကျောင်းဝင်းဆက်သွယ်သောအဓိကလူကူးလမ်းဖြစ်သော Ring ကို Mall ကဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးဆိုင်ရာဌာနများဘွဲ့ကြိုဌာနပိုမိုနီးကပ်စွာနဲ့ post-ဘွဲ့ရဌာနများနောက်ထပ် Aldrich ပန်းခြံ၏ဗဟိုကနေအတူဗဟိုမှဆွေမျိုးနေရာယူထားကြသည်။
UC Irvine မှာအလယျပိုငျးကမ္ဘာမြေအိမ်ရာ
UC Irvine မှာအလယျပိုငျးကမ္ဘာမြေအိမ်ရာ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
JRR စာရေးသူ JRR Tolkien ရဲ့လက်စွပ်၏ထာဝရဘုရားထံတော်မှသောနေရာများနှင့်ဇာတ်ကောင်ပြီးနောက် Named, အလယျပိုငျးကမ္ဘာမြေအိမ်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကို 1,700 ကျောင်းသားများကိုရတာဟာ။ အလယျပိုငျးကမ္ဘာမြေ 24 နေထိုင်ရာခန်းမနှင့် Brandywine နှင့် Pippin Commons အမည်ရှိနှစ်ခုထမင်းစားခန်းခန်းမများ၏ပါဝင်သည်။ အများစုမှာခန်းကပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေများအတွက်စံပြအိမ်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအောင်နှစ်ချက်ထေိုဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုခန်းမတစ်တီဗီနှင့်လေ့လာမှုဧရိယာနှင့်အတူတစ်ဘုံအခန်းထဲပါဝင်ပါသည်။
အချို့သောခန်းမအိမ်မှာအထူးအကျိုးစီးပွားကြမ်းပြင်မှဖြစ်ကြသည်။ မြူဆိုင်းသောတောင်တန်းသင်ကြားရေးနှင့်ပညာရေး၏လယ်ပြင်တွင်စိတ်ဝင်စားနေသောဦးပထမဦးဆုံးကျောင်းသူများအားနေရာဖြစ်သည်စဉ်ဥပမာအားဖြင့်, Isengard, လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦး "Non-စျကွောစီရငျအာကာသ" ဖြစ်ပါတယ်။
UC Irvine မှာ Langson စာကြည့်တိုက်
UC Irvine မှာ Langson စာကြည့်တိုက် (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
Langson စာကြည့်တိုက်လူမှုရေး, ပညာရေး, လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်လူမှုရေးဂေဟဗေဒအဘို့အ UCI ၏အဓိကဘွဲ့ကြိုစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာကြည့်တိုက် 2003 Langson အတွက် Newport Beach လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကယျြပွနျ့အရှေ့အာရှစာပေစုဆောင်းခြင်း, ဝေဖန်သီအိုရီမော်ကွန်း, အထူးစုစည်းမှုများ, နှင့်အရှေ့တောင်အာရှမော်ကွန်းတိုက်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ , ဂျက် Langson ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိ
UC Irvine မှာခရောပြေးခုံပစ် Complex
UC Irvine မှာခရောပြေးခုံပစ် Complex (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါခရောအားကစား Complex UCI ရဲ့ကျောင်းဝင်းအပေါ်နှစ်ခုကအဓိကအပန်းဖြေစင်တာများတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါဘရန်ပွဲများစင်တာ, Anteater Ballpark, Track နှင့်ဖျော်ဖြေမှု Stadium, အခရောအားကစားရုံ, 25 မီတာကိုရေကူးကန်နှင့်ဂေါက်ကွင်း: အဆိုပါ 45 ဧကရှုပ်ထွေးအများအပြားအဆောက်အ featuring, UCI ရဲ့ Intercollegiate ပြေးခုံပစ်ရန်မူလနေရာဖြစ်သည်။
UC Irvine မှာကျောင်းသားစင်တာ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါ UCI ကျောင်းသားစင်တာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများ၏နှလုံးအဖြစ်ကျောင်းဝင်းအပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေပါပဲ။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်စာအုပ်ဆိုင်နှင့်ကွန်ပျူတာစတိုးဆိုင်ဗဟို၏ပထမဦးဆုံးကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိပြီးနေကြပြီး, STA ခရီးသွား, UCI ရဲ့ကျောင်းသားခရီးသွားအေဂျင်စီ, ဒုတိယကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ဗဟိုဟာသွေးအလှူရှင်ရေးစင်တာမှအိမ်, ကျောင်းပရဝုဏ် Assault အရင်းအမြစ်များနှင့်ပညာရေး, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံ, လိင်တူ, ရိုးရိုး, လိင်အရင်းအမြစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစင်တာကိုလည်းထောင်ဝင်းထဲမှာလေ့လာမှုနေရာများနှင့် Doheny သဲသောင်ပြင် Lounge ဟာအဖြစ်ကျောင်းသားများအတွက်အခမဲ့ကွန်ပျူတာဓာတ်ခွဲခန်းပေးပါသည်။ ကျောင်းသားစင်တာကျန်ကြွင်းသောအရပ်တွင်တည်ရှိသောအဆိုပါ Zot ဇုန်ဂိမ်းများအခန်းရှစ်ဘိလိယက်စားပွဲ, ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများ, ကာရာအိုကေ, ငါး, Xbox 360 ဂိမ်းစက်များတပ်ဆင်ထားပါသည်။ အဆိုပါစင်တာ Starbucks က, အပရွက်ဆိတ်တောင်ပို့အရက်ဆိုင် & ကင်, ဂိရဲ့ပီဇာနှင့်ခေါက်ဆွဲ, Jamba ဖျော်ရည်, အော်ဂဲနစ်ဂရင်း-to-Go ကို, Panda Express, Quiznos ရဲ့, Wahoo ရဲ့ငါး Taco နှင့် Wendy ရဲ့အပါအဝင်ထမင်းစားခန်း options အမျိုးမျိုးကိုပေးထားပါတယ်။
UC Irvine မှာအာရိုယို Vista ကအိမ်ရာ
UC Irvine မှာအာရိုယို Vista ကအိမ်ရာ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါ Anteater အပန်းဖြေစင်တာမှမှလာမယ့်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၏ eastside ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, အာရိုယို Vista ကအဓိကအား upperclassmen အိမ်-စတိုင်ဆောင်ပေးပါသည်။ အာရိုယို Vista မှာ 42 အိမ်များ 8 နှင့် 16 ခန်းအကြားအထိတစ်ဦးချင်းစီအိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွ, ရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို suite ကိုတစ်ဦး shared ရေချိုးခန်း, ဘုံအခန်းတစ်ခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်ရှိတယ်။
UC Irvine မှာ Krieger ခန်းမ
UC Irvine မှာ Murray Krieger ခန်းမ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
Murray Krieger ခန်းမ UCI လူ့နှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံဌာနမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ 1965 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့, Krieger ခန်းမ၏ "အနာဂတ်" ဗိသုကာစတိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတစ်လျှောက်လုံးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Krieger ဝီလျံ Pereira ကဒီဇိုင်းရှစ်မူရင်းအဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
UC Irvine မှာ Aldrich ခန်းမ
UC Irvine မှာ Aldrich ခန်းမ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါ Ring ကို Mall ကပေါ်ကျောင်းသားရေးစင်တာမှ ဆက်လက်. Aldrich ခန်းမ UCI ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရုံးများများအတွက်ဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်များ၏ရုံးခန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများ၏ရုံးခန်း Aldrich ခန်းမ၏ဒုတိယကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိနေကြသည်။ ထို့အပြင် Aldrich ခန်းမထိုကဲ့သို့သော Langson စာကြည့်တိုက်များနှင့် Kreiger ခန်းမအဖြစ် UCI ရဲ့မူလအဆောက်အဦးများ, ကသာအနည်းငယ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်တစ်ဦးကွဲပြားဗိသုကာစတိုင်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
UC Irvine မှာ Anteater ရုပ်ထု
UC Irvine မှာ Anteater ရုပ်ထု (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
UCI ရဲ့ mascot ပတေရုသ Anteater တစ်ကျောင်းကျယ်ပြန့်ကျောင်းသားရွေးကောက်ပွဲကတဆင့် 1965 ခုနှစ်တွင်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ anteater ၏တစ်အုပ်ဖြစ်သည် Johny ဟတ်ရုပ်ပြချွတ်ထံမှပတေရုသအားဖြင့် Anteater မှုတ်သွင်းသည့် Seahawks သို့မဟုတ် bison ကဲ့သို့အခြားအလားအလာ mascots သော်လည်း, "ဘီစီ" သည်, anteater ကျဉ်းမြောင်းစွာ "အဘယ်သူအားမျှထွက်ရိုက်နှက်, ကျောင်းသားမဲ 56% ဖြစ်နိုင်ခြေအနိုင်ရခဲ့ကြသည်ခဲ့သည် အထက်ပါ၏။ " ပေတရု၏အထက်ရုပ်တုဒါဟာဘရန် Events Center အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် 1987 ၏အတန်းမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
UC Irvine မှာစီးပွားရေး Merage ကျောင်း
UC Irvine မှာစီးပွားရေး Merage ကျောင်း (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
စီးပွားရေး၏ Merage ကျောင်းက MBA, Ph.D ဘွဲ့ကိုကမ်းလှမ်း နှင့်ဘွဲ့ဒီဂရီပရိုဂရမ်များ။
ကျောင်းသားများ Merage မှာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကိုအောက်ပါဒေသများ၏တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအတွက်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်စာရင်းကိုင်; စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့်ပြည်သူ့ပေါ်လစီ; ဘဏ္ဍာရေး; စီမံခန့်ခွဲမှု, သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ; စျေးကွက်ရှာဖွေရေး; စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက် Technologies က; အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဟာဗျူဟာ; အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်; မဟာဗျူဟာ။
စီးပွားရေး Merage ကျောင်းဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းများသို့မိမိတို့၏စိတ်ကူးများလွှဲပြောင်းရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်းသားများအားပညာရေးနှင့်လမ်းညွှန်မှုပေးထားသည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ဒွန် Beal စင်တာမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါစင်တာကိုနှစ်စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယှဉ်ပြိုင်မှုအဖြစ်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
UC Irvine မှာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ Donald ဘရန်ကျောင်း
သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ Donald ဘရန်ကျောင်း (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏ Donald ဘရန် School တွင်အဆိုပါ UC စနစ်တွင်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏တစ်ခုတည်းသောဆက်ကပ်အပ်နှံကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2002 ခုနှစ်တွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏ 35 နှစ်အရွယ်ဦးစီးဌာနကျောင်းမှခြီးမွှောကျခဲ့သညျ။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, သတင်းအချက်အလက်, နှင့်စာရင်းအင်းများ: ယနေ့ကျောင်းသုံးဌာနများသို့ခွဲထွက်သည်။ အဆိုပါကျောင်းသည်ကျောင်းသည်လက်ရှိတွင် 500 ကျော်ကွန်ပျူတာများစုစုပေါင်းနှင့်အတူသုံးအဆောက်အဦးများရှိပြီး 2004 ခုနှစ် $ သန်း 20 လှူဒါန်းခဲ့သောသူ Donald ဘရန်, ဒေသခံတစ်ဦး realtor ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဘရန်ကျောင်းဇီဝဆေးပညာကွန်ပျူတာ, စီးပွားရေးသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု, ကွန်ပျူတာဂိမ်းသိပ္ပံ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ & အင်ဂျင်နီယာ, သတင်းအချက်အလက်, သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့် Software များအင်ဂျင်နီယာရှစ်ဘွဲ့ကြိုဗိုလ်ကြီးပေးထားပါတယ်။ ICS အတွက် Ada Byron သုတေသနစင်တာ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံလယ်ကွင်းအတွင်းလူနည်းစုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
UC Irvine မှာ McGaugh ခန်းမ
UC Irvine မှာ McGaugh ခန်းမ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါ Ayala သိပ္ပံစာကြည့်တိုက်ကနေဖြတ်ပြီး, McGaugh ခန်းမဇီဝဗေဒဌာနမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦသည်လက်ရှိတွင်ကင်ဆာဇီဝဗေဒ, ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ, ဆယ်လူလာယိုယွင်းများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု၏ဧရိယာများတွင်သုတေသနပြုဖြစ်ပါတယ် UCI မှတ်ဉာဏ်၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိနှင့် 2001 ခုနှစ် McGaugh ခန်းမ, အ Developmental ဇီဝဗေဒရေးစင်တာအတွင်း၌တည်ရှိပြီးပါမောက္ခဂျိမ်းစ် McGaugh, သင်ယူခဲ့သည်။
UC Irvine မှာအင်ဂျင်နီယာဟင်နရီ Samueli ကျောင်း
UC Irvine မှာအင်ဂျင်နီယာဟင်နရီ Samueli ကျောင်း (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
1965 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အင်ဂျင်နီယာများ၏ဟင်နရီ Samueli ကျောင်းငါးခုဌာနများအတွက်ဘွဲ့နှင့်ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီကမ်းလှမ်း: (ဇီဝဆေးပညာအင်ဂျင်နီယာ, ဓာတုအင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းများသိပ္ပံ, မြို့ပြနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ, လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသတင်းအချက်အလက်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏ဘရန်ကျောင်းနှင့် တွဲဖက်. ), နှင့်စက်မှုနှင့်လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ။
အဆိုပါကျောင်းတွင်နှစ်ဦးစလုံးအင်ဂျင်နီယာကျောင်းများအမည်တူ၏အပြစ်ကိုခံအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော UCI နှင့် UCLA ရဲ့နှစ်ဦးစလုံးမှတစ်ဦး $ 20 သန်းလှူဒါန်းမှု, အောက်ပါဟင်နရီ Samueli, အ Irvine-based ကုမ္ပဏီ, Broadcom Corporation ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
UC Irvine မှာဖရက်ဒရစ်ကျောက်ကပ်ခန်းမ
UC Irvine မှာဖရက်ဒရစ်ကျောက်ကပ်ခန်းမ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ကျောက်ကပ်ခန်းမဖရက်ဒရစ်ကျောက်ကပ်ရူပဗေဒ၏လယ်ပြင်၌ရှိသော 1995 ခုနှစ်နိုဘယ်ဆုရှင်၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိ၏။ ဓာတုဗေဒ, ကမ္ဘာမြေစနစ်သိပ္ပံ, သင်္ချာနှင့်ရူပဗေဒ & နက္ခတ္တဗေဒ: 1965 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံကျောင်းငါးခုဌာနများပါဝင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံကျောင်းအတွက်စာရင်းသွင်းအကြောင်းကို 1200 ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုရှိပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ခန်းမအတွက်ရူပဗေဒ & နက္ခတ္တဗေဒဦးစီးဌာနမှမူလနေရာဖြစ်သည်။
UC Irvine မှာ Ayala သိပ္ပံစာကြည့်တိုက်
UC Irvine မှာ Ayala သိပ္ပံစာကြည့်တိုက် (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ကျောင်းဝင်း၏အနောက်ဘက်အဆုံးတွင်တည်ရှိသောအဆိုပါ Ayala သိပ္ပံစာကြည့်တိုက်ဇီဝသိပ္ပံကျောင်း၏စိတ်နှလုံး၌တည်ရှိ၏။ 2010 ခုနှစ်, စာကြည့်တိုက်အတွက် UCI ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇီဝဗေဒပညာရှင်၏ဂုဏ်အသရေအတွက် Francisco ကဂျေ Ayala သိပ္ပံစာကြည့်တိုက်မှအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါစာကြည့်တိုက်က Langson စာကြည့်တိုက်ကိုအုပ်စိုးလူကြိုက်များလေ့လာမှုတည်နေရာအောင်, ကျောင်းဝင်းပေါ်တွင်အကြီးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ Ayala သိပ္ပံစာကြည့်တိုက်ကိုလည်းလာမယ့်ပထမဦးဆုံးပေါ်ထောက်ပံ့ထားတဲ့လေ့လာမှုခန်း၏အကြီးဆုံးအရေအတွက်က, ပထမဦးဆုံးအခြေခံတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဆောက်အအုံသိပ္ပံမှတစ်ဦးကိုကိုးကွယ်သကဲ့သို့အမျိုးသမီးမျိုးပွားစနစ်၏ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ UCI မှာကောလဟာလသတင်းများအရဖြစ်ပါတယ်။
UC Irvine မှာဥပဒေကျောင်း
UC Irvine မှာဥပဒေကျောင်း (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
2009 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်, ပညတ်တရား၏ UCI ကျောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အများပြည်သူဥပဒေကျောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ JD အစီအစဉ်ကိုရိုးရာဥပဒေရေးရာအယူဝါဒ, အဖြစ်တရားခွင်၌များတွင်အသုံးပြုဥပဒေရေးရာဆန်းစစ်နှင့်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်မှုဆုံးမဩဝါဒပေးအာရုံစိုက်။ ကျောင်းလည်းရာဇဝတ်တရားမျှတမှု, criminology, မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စများ, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း, လူ့အခွင့်အရေး, မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အသိပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်တစ်ပြိုင်တည်းဘွဲ့ရအစီအစဉ်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးပထမဦးဆုံးနှစ်ကျောင်းသားများကိုသူတို့အလုပ်မှာနာရီအချို့အရေအတွက်စောငျ့ရှောကျဖို့လိုအပ်သည်ဘယ်သူကိုရှေ့နေဆရာပေးအပ်ထားတယ်။ UCI ဥပဒေကိုလည်းကျောင်းသားများအပညတ္တိကျမ်းလယ်ကွင်းအတွင်းလုပ်အားပေးဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောထားတဲ့အတွက်လိုလားသူ Bono အစီအစဉ်ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကျောင်းတွင်ဇွန်လ 14, 2014 ရက်တွင် ABA ကနေအပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုရရှိပါလိမ့်မယ်။
UC Irvine မှာ crystal Cove ဇာတ်ရုံ
UC Irvine မှာ crystal Cove ဇာတ်ရုံ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ကျောင်းသားရေးစင်တာအတွင်းပိုင်း, Crystal Cove ပရိသတ်ခန်းမ UCI ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ crystal Cove ကသေးငယ်တဲ့ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ခြစ်ခြစ်အဖြစ်ရံဖန်ရံခါညီလာခံနှင့်ဧည့်သည်စပီကာများအတွက်စံပြတည်နေရာအောင်, ဝန်းကျင် 500 ထိုင်ခုံတစ်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
UC Irvine မှာလူမှုရေးသိပ္ပံပလာဇာ
UC Irvine မှာလူမှုရေးသိပ္ပံပလာဇာ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
လူမှုရေးသိပ္ပံ UCI ရဲ့ကျောင်းအလယျပိုငျးကမ္ဘာမြေအိုးအိမ်များနှင့်ကျောင်းသားရေးစင်တာအကြား Aldrich ပန်းခြံ၏မြောက်ဘက်အဆုံးတွင်တည်ရှိသည်။ မနုဿဗေဒ, စီးပွားရေးစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်, Chicano Studies, လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လူမှုသုံးသပ်ခြင်း, စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်, နိုင်ငံတကာလေ့လာရေး, သင်္ချာအပြုအမူသိပ္ပံ, ဒဿနိကဗေဒ, နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ, စိတ်ပညာ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒ, ဘက်စုံစီးပွားရေး, လူမှုရေးပေါ်လစီ & ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု: အဆိုပါကျောင်းတွင်အောက်ပါနယ်ပယ်များတွင်ဒီဂရီပရိုဂရမ်များကမ်းလှမ်း , လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်လူမှုဗေဒ။
UC Irvine မှာဘရန် Events Center
ဘရန်ပွဲများ UC Irvine မှာစင်တာ (ချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါဘရန် Events Center UCI ရဲ့မိုးလုံလေလုံဖြစ်ရပ်များနှင့်အားကစားကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ 5000 တစ်စွမ်းရည်နှင့်တကွ, နှစ်စဉ်ကျောင်းကကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ဖျော်ဖြေပွဲ, ကခုန်ဖျော်ဖြေပွဲ, ပို့ချချက်များနှင့်ပွဲအဖြစ်ဘတ်စကက်ဘောနှင့်ဘော်လီဘောဂိမ်းနေထိုင်ကြသည်။
: UC Irvine နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားစနစ်တက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာရန်
UC Irvine အဆင့်လက်ခံရေးကိုယ်ရေးဖိုင်
GPA, SAT နှင့် ACT ဇယား UC Irvine အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက်
အဆိုပါ UC စနစ်၏အကျဉ်းချုပ်
အဆိုပါ UC ကိုယ်ပိုင်ဖော်ပြချက်များအတွက်သိကောင်းစရာများ
တစ်ဦးပွဲစဉ်ကျောင်းတကယ်ပဲရောဖြစ်ပါသည်ဘယ်ဟာ6မှုများ
ပတ္တမြားအတွက် command-line Arguments
တစ်ဦး franchise တပတ်ရစ်မော်တော်ကားရောင်းဝယ်ရေးဆိုတာဘာလဲ
လူနာ Be လုပ်နည်း
UC Merced အဆင့်လက်ခံရေး
တစ်ဦးဘရော့ဒ်ဝေး Show ကိုတက်ရောက်5သိကောင်းစရာများ
အဆိုပါမွေးဖွားခြင်းဇယားအတွက် Gemini-Sagittarius မွန်းဆုံမှတ်များ
အဆိုပါသူဌေးကောင်းကင်ဘုံ (မာကု 10း17-25) ကိုရယူပါဘယ်လိုပေါ်သညျယရှေု
Triple H ကို
အားနည်းဘုရားမဲ့ဝါဒ vs. အားကောင်းတဲ့ဘုရားမဲ့ဝါဒ
Guy de Maupassant ၏တိုတောင်းသောအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဘယ်လို Long ကဒါဟာတစ်ဦးကငျြ့ဖွဲ့စည်းဖို့ကိုယူပါသလား
ယော်ဒန်မြစ်မှသုံးဂျက်လေယာဉ်များ၏ 1970 ပါလက်စတိုင်းအရေးပေါ်
ရုရှားရဲ့ 21 သမ္မတနိုင်ငံပထဝီဝင်